Ụkọ mmanụ ụgbọala, oke ọnụ ihe na-ada n’ahịa ga-egbochi ọga n’iru akụ na ụba Naijiria.
Ụkọ mmanụ ụgbọala na oke ọnụ ihe na-ada ga-ebute mgbochi nyee akụ na ụba Naijiria.
Obi dị m ụtọ maka ndị ntorobịa Naijiria- President Buhari.
Chigo	 Jun 26, 2022 0
Onyeisiala Buhari etoo ndi ntorobịa Naijiria
Naijiria binyere aka n’akwụkwọ nkwekọrịta iji kwalite mmepụta ego na mpaghara Telecoms.
Chigo	 Jun 20, 2022 0
Ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission (NCC) abanyela n'akwụkwọ nkwekọrịta ọha na eze n'onwe (PPP) na ụlọ ọrụ ndụmọdụ maka mmezu nke Revenue Assurance Solutions (RAS) iji wusie ike na jikwaa iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro ntinye…
Chigo	 Jun 18, 2022 0
Naijiria eguzobela National Center for Coordination of Early Warning and Response Mechanism na ntinye aka nke Executive Order 12 nke President Muhammadu Buhari. Ọnụ na-ekwuchitere osote onye isi ala, Laolu Akande kwuru nke a na…
Onyeisiala Naịjirịa bụ Mohammadu Buhari kwuru na mba na ndị ọrụ nchekwa ya ga-aga n'ihu na-ewepụta atụmatụ ọhụrụ iji merie ihe ịma aka nchekwa na-eche obodo ahụ ihu. Onyeisiala kwuru nke a n'emume nke 205 cadets nke 4th regular course…
USDA na-akwalite mgbakwunye bara uru iji mee ka mmepụta Cashew Naijiria dịkwuo elu.
Ngalaba Agriculture nke United states (USDA)'s, West Africa PRO-Cashew na African Cashew Alliance (ACA) na-arụ ọrụ n'ịbawanye mmepụta cashew nke Naijiria ruo metric ton 500,000 kwa afọ iji wepụta opekata mpe $4billion mbupu sitere na ngwa…
Mgbasa ozi maka ịkụ osisi 2022 malitere na Naijiria.
Chigo	 Jun 17, 2022 0
Gọọmenti Naijiria ewepụtala mkpasa ozi nke ịkụ osisi nke afọ 2022. Mịnịsta na-ahụ maka gburugburu ebe obibi Mr Abdullahi Muhammed kwupụtara nke a n'Abuja, bụ isi obodo mba ahụ n'akụkụ nnọkọ nke asatọ nke Council of…
Ụlọ ọrụ Naijiria kwadoro ụlọ akwụkwọ e-Learning ruru 109 maka ụlọ akwụkwọ praịmarị.
Federal Executive Council anabatala nkwekọrịta nke nde N964 maka inye akụrụngwa usoro mmụta dabere na satịlaịtị n'ụlọ akwụkwọ praịmarị atọ dị na steeti ọ bụla na Nigeria, gụnyere Federal Capital Territory, Abuja. Mịnịsta na-ahụ maka…
Ndị agha wepụrụ ndị na-eyi ọha egwu na North-East Naijiria.
Ndị agha Operation Desert Sanity na mmekorita ya na Civilian Joint Task Force dekọtara ihe ọzọ na 14 Juun 2022 ka ewepụrụ ọtụtụ ndị na-eyi ọha egwu ISWAP gburugburu Gurzum na Borno State. Nkwupụta sitere n'isi ụlọ ọrụ ndị agha Naịjirịa…
Ụbọchị ochichi onye kwuo uche ya: Anyị agaghị echefu àjà ndị dike anyị chụrụ – President…
Chigo	 Jun 13, 2022 0
Ka Naijiria na-eme ncheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya nke iri abụọ na atọ, onyeisiala Muhammadu Buhari kwuru na ụmụ amaala obodo ahụ agaghị echefu ihe ndị dike obodo ahụ chụrụ. O nyere ndụmọdụ a na mgbasa ozi obodo niile nye…